Fantsom-panafody, lakandranon'i kristaly, lavalava fanasan-damba, tranom-bilia
Hazo tongolobe kobay
Boky mirakitra vy
Antsoy izahay izao + 20 100 222 4297
Tsy misy vokatra ao anaty sarety
Mandehana any amin'ny fivarotana
Hazo tongolobe kobayNy kôpera dia ampiasaina matetika amin'ny toeram-pitsaboana, izay ahitana ireo viriosy, bakteria, ary fungi dia manjanaka sy mikiry amin'ny trano fisakafoanana, rindrina, latabatra, tabilao (tapaka) ary fitaovana maro sy fitaovana maro hafa. Ny Copper dia manaporofo fa ny fanosorana amin'ny ady amin'ny antibiotika dia mandoro hatrany hatrany ny bakteria, tsy tratra mihitsy, ary azo antoka fa ampiasaina amin'ny tavy varahina mba tsy hisorohana ny fanaovana reserves amin'ny fihanaky ny mikraoba. Ireo mikrôby ireo dia mety ho tafavoaka velona mandritra ny fotoana maharitra.
Basket Crystal ChandeliersKitapo metaly Cage
Basket Crystal Sconceskrystaly-rindrina-sconces
Toeram-pitsaboana foot massage
Fonosana fantsom-baton'ny metaly
Mitsangana ny laptop-kapila
Iron Wall Scones
Vokatra vita amin'ny tanana vita amin'ny tanana, fanala amin'ny vidiny tsara indrindra
Ny mpahay zavakanto dia mampiasa fitaovam-piadiana sy fitaovana tsotra manerantany ho an'ny fitaovam-panorenana vita amin'ny varahina, lakandranon'i kristaly, lavalava fanasam-bidy, koveta kanto, tsela, fanoratana vy ary antontan-doko antononta antitra ho an'ny trano sy ny zaridaina. Ny dingana toy izany dia mitovy amin'ny Ejipsiana fahiny izay ambony noho ny fananganana rafitra sy ny fananganana trano. Tsy mahagaga raha ny tranon'ilay lehilahy no nanao piramida sy sphinx izay anisan'ny trano malaza teo amin'ny tantara.
A1 Ejipta mifantoka amin'ny spa-varahina varahina pedicure foot basins, horonantsary kristaly, Toerana fandroana, latabatra varahina varahina, bozaka fantsom-bozaka, fanoratana vy mamolavola ny vatan'olombelona, ​​ny trano sy ny zaridaina. Asehon'ireto sary ireto fa ny Farao no nampiasa Pedicures ho an'ny fitsaboana sy fitsaboana hoditra hoditra.Ny pedicure dia avy amin'ny teny latinina pedi cura midika hoe fitsaboana ny tongotra.Ankehitriny, ny fototeny dia ampiasain'ny vehivavy manerana izao tontolo izao ho an'ny fitsaboana ny hoditra, ny fanasitranana ny tongotra ary ny fitsaboana amin'ny paiso.
Basin-tongotra matevina, lavalava fanasan-drano, Tops
Ny mpanao asa tanana Ejipsiana no mpanefy varahina tsara indrindra any Mediterane. Ny vilia sy ny lakozia vita amin'ny varahina varahina dia vita tanana, hosodoko, ary nohavaozina toy ny hoe Tendrombohitra, eo ambanin'ny tendrombohitra na sambo dia miankina amin'ny antontam-bokatra na trano fivoahana. Ny endrintsika varahina dia ny lohataona, ny afo nodorana, ny polisy, ny antika patina, ny plastika ary ny verdigris vintage.
Ny kôpera dia mahatsapa be loatra ny fitarihana hafanana, manely ny hafanana ary mitahiry hery. Ny fitaovana varimbazaha dia tonga eo amin'ny tany tsy misy orinasa na tin-bazaha mifototra amin'ny karazan-tsakafo.
Ny kolontsainay nentim-paharazana Frantsan'ny Kristianisim-bokatra dia misy kofehy kely an'arivony izay hampiseho taratra ny trano fananana tompon-trano mba hahazoana ny fitaovana tsara indrindra natao teo amin'izao tontolo izao. Ireo antontan-tsainay antitra français taloha dia tsy misy toerana misy azy.
Fitaovana mahandro vita amin'ny vokatra
Ny tanjon'ny tànantsika dia manentana ny fitaomam-panahy avy amin'ireo mpanjifantsika, mpivarotra antitra, mpanamboatra, tompona fivarotana, mpanakanto, mpandraharaha, mpanamboatra trano, architects, mpanorina ary tompona trano. Mampiasa metaly vita amin'ny varahina, aliminioma, vy, kristaly ary vera izahay mba hanamboatra endrika samihafa. Ny vokatray dia nanome samihafa fitaovana samihafa mba hanomezana endrika tsara indrindra.
Isika dia manamboatra ny vokatra rehetra ary mizara mivantana amin'ny mpanjifantsika antsinjarany sy mozika. Afaka manome fomba amam-pitaovana, endrika, teboka, vita, logos ary serivisy isaky ny fangatahana isika.
Alefaso anay mailaka ary avereno aty aminao, asap.
© 2018 · a1egypt.com, Zo rehetra voatokana